यूएस बंगला विमान दुर्घटनाकी घाइते प्रिन्सी धामीको मृत्यु, को हुन् प्रिन्सी ?::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | शुक्र, चैत्र १६, २०७४
यूएस बंगला विमान दुर्घटनाकी घाइते प्रिन्सी धामीको मृत्यु, को हुन् प्रिन्सी ?
१६ चैत्र,काठमाडौं । प्रिन्सी धामीको पनि उपचारको क्रममा निधन भएको छ । उपचारको क्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा विहीबार धामीको निधन भएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा यूएस बंगलाको जहाज दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते धामीको उपचार नेपालमा हुन नसकेपछि भारत लगिएको थियो । उक्त विमानमा बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन सकेर धामीसहित १३ जना नेपाली विद्यार्थी फर्कदै थिए ।
अछाम मंगलसेन स्थायी घर भएकी धामी पढाइमा सानैदेखि अब्बल भएकी प्रिन्सीले काठमाडौंको जमलमा रहेको भानुभक्त मेमेरियल स्कुलबाट एसएलसीमा डिस्टिङसन श्रेणीमा पास गरेकी थिइन् । त्यसपछि लैनचोरको निस्ट कलेजबाट विज्ञानमा ७४ प्रतिशत ल्याई उच्च मावि तह पास गरिन् ।
सानैदेखि डाक्टर पढ्‍ने सपना थियो प्रिन्सीको । घर परिवारलाई पनि छोरी डाक्टर बनेको सपना थियो । त्यो सपना पूरा गर्न प्रिन्सीका बुबा मनोज धामी वैदेशिक रोजगारीमा गए । दुबैमा पसिना बगाउँदै डाक्टर पढाएका थिए ।
मनोजको परिवार काठमाडौं बसुन्धारा बस्दै आएको थियो । मनोज दम्पतीको एक मात्र चाहना थियो, प्रिन्सीको राम्रो भविश्य, छोरी डाक्टर बनेको । त्यो चाहना पूरा पाएन नै जीवनभर एक्लो महशुस गर्नुपर्ने बाध्‍यता सिर्जना भएको छ । प्रिन्सी अछाममै जन्मिएकी हुन् । छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन मनोज काठमाडौं झरेका थिए ।
छोरीको राम्रो भविश्यकै लागि मनोजले दुबईमा सुरक्षाकर्मीको रुपमा काम थाले । छोरी डाक्टर बनाएर मत्रै दुबईबाट विदा हुने योजना मनोजको थियो ।
धामी दम्पतीको सबै योजना र सपना फागुन २९ गते सीसा फुटेझैं झुराझुरा भए । यूए बंगलाको विमानमा पढाइ सकेर घर फर्कदै गर्दा प्रिन्सी दुर्घटनामा परिन् । उनीसहित १३ जना एमबीबीएस पढेर नेपाली विद्यार्थी फर्केका थिए । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी प्रिन्सीलाई उपचारको लागि सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको आइसीयु ५०५ नम्बर बेडमा भर्ना गरियो ।
छोरी दुर्घटनामा परेको खबर सुनेपछि बुबा मनोज युएईको दुबईबाट नेपाल अाए । केही थप उपचारको लागि प्रिन्सीलाई भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको थियो । तर बाचिनन् ।
बंगलादेशको राजीव रवेया मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस अन्तिम वर्षको परीक्षा सकेर फर्केन क्रममा विमानमा चढ्‍नुभन्दा पहिला प्रिन्सीले घरमा फोन गरेकी थिइन् ।
यात्रु र चालक दल गरी ७१ जना सवार जहाजमा बंगलादेशको ढाका विमानस्थलबाट दिउँसो साढे १२ बजे काठमाडौंका लागि उडेको थियो। नेपाल पुग्दा दिउँसोको २ बजिसकेको थियो। जहाजका चालक थिइन् पृथुला रसिद। घाइते पाइलट पृथुला पनि बाचिनन् ।
यस्तो छ संवाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कन्ट्रोल रुम र पाइलटबीचको संवाद
यसैवीच कन्ट्रोल रुमका कर्मचारीहरुको आन्तरिक सम्वाद सुनिन्छ- यो जिरो टू र टू जिरोमा अलमलिए जस्तो छ । यति एयरलाइन्सका पाइलट रमेश श्रेष्ठले यो सम्वाद सुनिरहेका थिए र विमानलाई पनि नियालिरहेका थिए, त्यहाँ उनले भनेको सुनिन्छ- यो कतातिर जाला जस्तो छ । यसलाई राडर भेक्टर प्रयोग गरेर ठाउँमा ल्याउनुपर्छ जस्तो छ । डाँडाकाँडामा भिजिविलिटी राम्रो छैन । (राडर भेक्टर प्रयोगका लागि पाइलटले माग गर्नुपर्छ र कन्ट्रोलले आवश्यक निर्देशन दिएर अवतरण गराउँछ )
कन्ट्रोल रुमः वांगला स्टार २११ । तपाईँले रनवेलाई देखिराख्नुभएको छ ? कन्फ्रम गर्नुस् ।
कन्ट्रोल रुमः ९ लिमा ट्यांगो ! अहिलेकै स्थानमा बसिरहनुस् ।
कन्ट्रोल रुमः बंगला स्टार २११, म फेरि भन्छु, त्यसो नगर्नुस् ।
शुक्र, चैत्र १६, २०७४ मा प्रकाशित